September 2017 – Dhammadīpa
Flowered to Death
Posted on 16 Sep 2017 by Ashin Sopāka
Death takes up and carries away the one
whose mind is attached to collecting flowers,
likeagreat flood (carries off)asleeping village. – Dhp 48
Pupphāni heva pacinantaṁ,
antako kurute vasaṁ.
ပန်းတို့ကို ကောင်းနိုးရာရာ ဆွတ်ခူးသောသူကဲ့သို့ ကာမဂုဏ်တို့ကို ဆွတ်ခူးလျက် မရသေးသည်ကို တောင့်တ၊ ရပြီးသည်ကို တွယ်တာ၊ လွန်စွာ ကပ်ငြိသည့် စိတ်ရှိသော ကာမဂုဏ်တို့၌ မရောင့်ရဲနိုင်သောသူကို သေမင်းယုတ်သည် မိမိအလိုအတိုင်း ပြုနိုင်၏။
Dewy Frangipani ©Ashin Sopāka 2017
Posted in Dhamma	| Tagged death, dhamma, mindfulness
Ledi Sayadaw Resolution
Posted on9Sep 2017 by Ashin Sopāka
Ledi Sayadaw’s resolution:
“A good spreading tree,
On which ten thousand birds can roost,
Would I like to be,
Bringing peace for all.”
Posted in Dhamma	| Tagged adhitthana, dhamma, ledi sayadaw, resolution, လယ်တီဆရာတော်, ဦးဉာဏဓဇ